Wararka - Qaar ka mid ah Talooyinka Ku Saabsan WPC
Waxyaabaha isku dhafan ee caaga ah (WPC) waxay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka alwaaxda iyo polymer-ka labadaba, laakiin way ka madax bannaan tahay cilladooda. Waxyaabaha WPC waa awood sare, waxay ka hortagtaa qurmay, iska caabbinta cimilada, iska caabinta xajinta. iyo madal kale oo bannaanka ah. Iyada oo ay jiraan awoodo badan oo wanaagsan, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa isticmaala qalabka WPC si ay u qurxiyaan aaggooda Laakiin laakiin miyaad taqaan qaar ka mid ah tilmaamaha wax soo saarka WPC?
1. Macaamiil qaarkod waxay si ba'an u doonayaan inay helaan derajadooda WPC markey amar soo saaraan. Ha u dulqaadan saaxiibkeyga qaaliga ah, warshada WPC waxay ubaahantahay waqti ay ku soosaarto iskuxirkaaga WPC. si deg deg ah, Haddii alaabta ceeriin ah waxaa si deg deg ah extruded, guryaha aaladaha farsamo ee Gogosha WPC way sii xumaan doontaa marka la sameeyo Laakiin taasi micnaheedu maahan, ka gaabis badan oo ka tayo wanaagsan.
2. Sida aan ognahay, waxyaabahayaga WPC waa kuwo si buuxda dib loo cusboonaysiin karo iyo bay'ad deegaanka ah.Sidaa darteed macaamiisha qaar ayaa ka walwalsan tayada tayada. Waxaan kuu ballanqaadnay inaanan waligood isticmaali doonin wax dib loo cusbooneysiin karo. Dhammaan dalabkeenna, waxaan u isticmaali doonnaa waxyaabo cusub waana tijaabin doonaa sheyga markii aan iibsaneyno sheyga.Sidaas oo kale, waxaan hubin karnaa tayada wanaagsan ee iskuxirka WPC isku dhafan.
3. Dhibaatada ugu badan ee alaabada WPC way sii xumaaneysaa. Sida cimilada qaaska ah, sida cadceedda oo aad u sarreysa taas oo ka dhigaysa in alaabooyinka oo dhami ay fududaan karaan inay lumiyaan midabkooda. Haddii waddankaagu leeyahay xaalad la mid ah, waxaad u baahan tahay inaad u sheegto warshaddeena. ku darista iska caabinta badan ee UV, waxay ka dhigi doontaa looxyada WPC inay yihiin kuwo iska caabin badan. Xaalad kasta ha ku jirtee xaaladdeena, alaabooyinkeenu way haysan karaan midabka ugu yaraan 5-10 sano.Tani waa awood aad u wanaagsan.
Markaa sidee ku saabsan quudintaada ku saabsan iskudhafkeenna isku-dhafka ah ee loo yaqaan 'WPC decking with my sharaxaad ah' Haddii aadan sugi karin inaad hesho alwaax isku dhafan oo caag ah, dhaqso ula soo xiriir
Waqtiga dhejinta: Jul-06-2021
Qurxinta WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, Dabaqa WPC, Bannaanka WPC decking, alwaax decking isku dhafan, Gogosha WPC,